warkii.com » XOG: Hoggaanka Madasha oo shaaciyay hal arrin oo haddii aan la fulin halis ka dhalan karta
XOG: Hoggaanka Madasha oo shaaciyay hal arrin oo haddii aan la fulin halis ka dhalan karta
Hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran ayaa si adag kaga digay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii aan la fulin qodobada lagu heshiyay shirkii magaalada Dhuusamareeb oo u dhaxeeyay DF iyo maamulada dalka.
Madasha Xisbiyada waxay kula talisay labada dhinac inay si dhab ah u fuliyaan qodobada lagu heshiiyay, iyagoo markaasi gudanaya waajibaadka ka saaran. Madasha ayaana ka digtay in laga caga-jiido xaqiiqda iyo halista ka dhalan karta, haddii aan heshiiskaasi la fulin.
Sidoo kale, Madasha Xisbiyada Qaran oo ay ku mideysan yihiin ilaa iyo lix xisbi oo ka dhisan dalka ayaa ku celisay mowqifkeeda ku aadan in doorashada dalka ku dhacdo waqtigeeda, lana gaaro heshiis wax ku ool ah oo loo dhan yahay.
Dowladda Federaalka iyo Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka ayaa Heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda dalka ku gaaray magaalada Dhuusamareeb, inkastoo si dhab ah loo cadeyn nooca doorasho ee la galayo 2020/21.
15-ka Bisha Agoosto ayaa lagu wadaa in mar kale xubnahan ku kulmaan magaalada Dhuusamareeb, shirkaas oo si dhab ah go’aan looga gaarayo nooca doorasho ee dalka sanadka soo socda.
Beesha caalamka ayaa soo dhoweysay go’aanadii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb,waxayna bogaadisay in la dhammeeyay khilaafkii mudada soo jiidamayay ee u dhaxeeyay Dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada dalka.